Isu tine hukuru hwakasiyana uye maumbirwo ehuni huni.
Smooth huni marozari: Humwe huni hwehuni hwakagadzirwa zvakanaka kuti huve neyakaenzana nzvimbo isina kana maburi uye mabhureki. Mhete dzakatsetseka dzemapuranga dzinogona kupendwa dzakananga pasina jecha.
Yakareruka Tambo: Hunhu hwemapuranga ehunyanzvi marozari ndeyekuti kune yakajeka pre-yakaboorwa gomba pakati, isina marara uye kuvhara. Makomba mahombe akaboorwa anotendera kuti ubate tambo dzemapuranga dzisina tsono.
Natural Wood Beads: Iwo asina kugadziriswa hura hwehuni hwakagadzirwa neakasarudzika emhando yepamusoro huni, inova yakajeka uye isina hwema hunoshamisa. Hunhu hwepanyama huni hunopa kubwinya chaiko, kukwezva kutariswa kwevanhu vese.
Inoshandiswa zvakajairika: Matairi edu emapuranga akatsetseka uye ane huni-mavara, akakodzera ako DIY hunyanzvi, maketani, zvishongo, imba yekushongedza, aya emapuranga marozari akakodzera kwazvo akasiyana siyana ekushongedza mapurojekiti.
Crochet Round Wooden Beads Vana Chikafu Chemusoro Giredhi ...
Wooden Beads Lose Natural Natural Yakatemwa l Melikey
silicone teething marozari , rwokuzvarwa teething, teething nechishongo mwana musikana, teether yakanakisisa 4 wemwedzi , silicone mwana teether , silicone teether ,